NFC ကိုထုတ်ကုန်များ, လက်ပတ် / လက်ကောက် NFC Polyester Elastic Bracelet, NFC Polyester Elastic Telescopic Wristband, NFC ကို polyester elasticity လက်ပတ်, RFID Polyester Elastic Bracelet, RFID Polyester Elastic Telescopic Wristband, RFID polyester elasticity လက်ပတ်
Personalization options: အရွယ်, အရောင်, RF IC chip, surface silkscreen LOGO or pattern, QR ကုဒ်ကို, စသည်တို့ကို.
ပစ္စည်း: polyester + PVC ပစ္စည်း tag ကို (သို့မဟုတ် PCB ပစ္စည်း tag ကို)
သက်ဆိုင် RF အကြိမ်ရေ: LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF
သက်ဆိုင်ဆက်သွယ်ရေး protocol များ: ISO ကို 14443 type A, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C
အထုပ် RF ချစ်ပ်: EM4102, TK4100, EM4200, T5577, FM11RF08, MF1 IC S50, Ultralight, NTAG213, NTAG215, NTAG216, ငါကုတ် SLIX, ဂြိုလ်သား h3, IMPINJ M4, စသည်တို့ကို.
အရွယ်: 190X25X1.5mm, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
ဖဲကြိုးအရောင်: ပြာသော, အနီေရာင်, အနက်ရောင်, ဝါသော, စိမ်းလန်းသော, လိမ္မော်သီး, ခရမ်းရောင်နု, ပန်းရောင်, စသည်တို့ကို, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံကွန်ပျူတာရက်
Surface ကပုံနှိပ်ခြင်း: ပိုးမျက်နှာပြင်လိုဂိုသို့မဟုတ်ပုံစံ, ဂဏန်း, QR ကုဒ်ကို, စသည်တို့ကို.
The RFID Polyester Elastic Ribbon Wristband is designed and produced by computer. It can be produced any size, printed in any pattern, and can be arbitrarily designed. The elastic telescopic function is comfortable to wear and beautiful. The wristband is internally packaged with RFID chips for easy access control, identification and NFC payment items. The surface of the wristband can be printed, လိုဂို, serial number or internal code.
Personnel management, hospital patient management, baby child management, campus student management, nightclubs, ဖျော်ဖြေပွဲ, sports events, game parks, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, apartment access, လယ်ပြင်စစ်ဆင်ရေး, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product RFID Polyester Elastic Wristband, NFC ကို polyester elasticity လက်ပတ်, RFID polyester elasticity တယ်လီစကုပ်လက်ကောက်
prev: RFID တစ်ခါသုံး PVC လက်ပတ်, တစ်ကြိမ်လူနာ ID ကိုလက်ပတ်, တစ်ကြိမ်လူနာသတ်မှတ်ခြင်းလက်ပတ်
နောက်တစ်ခု: ACR122U-A9 NFC ကို Reader ကို, Felica, Mifare ထောက်ခံမှု,SDK ကို Pack ကို,ISO ကို 14443A / B,
RFID လက်ကောက်ဝတ်-လက်ပတ်နာရီထိကပေါက် Silicon လက်ပတ်, NFC ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ထိကပေါက် Silicon လက်ကောက်